Buy ရွှေဆန်းသစ် သဘာဝ ခေါင်းလျှော်ရည် (0Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
ရွှေဆန်းသစ် သဘာဝ ခေါင်းလျှော်ရည်
ရွှေဆန်းသစ် သဘာဝ ခေါင်းလျှော်ရည် တစ်ဗူး.3500ks ပျားရည် ကြက်ဥ ကင်ပွန်းသီး
ရှားစောင်းလက်ပပ် ထောလပတ် ကွမ်းရွက် သံပုရာသီး သခွားသီး သံလွင်ဆီ တို့ဖြင့် ဖော်စပ်ထားပါသည်
ဆံသားပျော့ပြီး ဗောက်ပျောက်သည် Shampoo info♡♡
🙅🙅🙅ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း ဗောက်ထခြင်း ဆံသားအဆီပြန်ခြင်း ခေါင်းချွေးထွက်ခြင်းကိုသိသိသာသာသက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည် 🙅🙅 🙆🙆🙆ဆံပင်​ကျွတ်​ခြင်း​ကြောင့်​ ဆံပင်​ပါးသွားခြင်း ဆိုးခြင်း​ကောက်​ခြင်းများ​ကြောင့်​ ဆံပင်​အကွက်​လိုက်​ကျွတ်​ခြင်းများ ​ခေါင်း​လျှော်​ရည်​တဗူးကုန်​တာနဲ့ သိသိသာသာဆံသားအသစ်​များပြန်​​လည်​ရှင်​သန်​လာပါလိမ့်​မယ်​🙆🙆🙆 👩👩👩ဆံပင်ဆိုးခြင်းကောက်ခြင်းဖြောင့်ခြင်းများကြောင့် ပျက်စီးကြမ်းတမ်းနေသော သူများ စွဲမြဲသုံးပေးခြင်းဖြင့် ဆံပင်သားပြန်လည်ကောင်းမွန်ပြီး ဆံပင်ပြန်သန်လာပါလိမ့်မည်
အမြှုပ်ထွက်အား ကောင်းမွန် ဦးရေနဲ့ဆံသားကို ဂျီးပြောင်၍ အေးမြစေပါတယ် . .
ခေါင်းလျှော်လိုက်တာနဲ့. ဦရေအေးမြမှု့ကို သိသိသာသာခံစားရပါလိမ့်မယ် 👩👩👩 😊😊☺ကလေးများခေါင်းချွေးထွက်လွန်း၍ ခေါင်းချွေးနံ့နံခြင်းကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည် .သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်များသာ အသုံးပြုထား၍ ကလေးသူငယ်များ သုံးစွဲလို့ရပါတယ်နော် ကလေးဆံပင်အုံကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မယ် 😊😊😊 🌵🌵🌵ပျော့ဆေးပေါင်းဆေး ထပ်မံသုံးစွဲရန်မလိုဘဲ . ၅မိနစ်ခန့် အမြှုပ်ဖြင့်ပေါင်းထားယုံဖြင့် ဆံသားနူးညံ့၍ အရောင်တောက်ပြောင်ပါတယ် ဦးရေအားဖြည့်ပေးသော သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်များ ပါဝင်သဖြင့် ဦးရေပြားကိုအားဖြည့်ပေးပြီး အရွယ်မတိုင်ခင် ဆံပင်ဖြူခြင်း ဆံပင်ကျဲခြင်း ထိပ်ပြောင်းခြင်းများ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါသည်🌵🌵🌵 🍎🍓🍑🍉ကင်ပွန်းသီး ရှားစောင်းလက်ပက် ထောလပတ်ရွက် .ပျားရည် ကြက်ဥ သံပုရာသီး သခွားသီး စသော ဆံကေသာအတွက်လိုအပ်တဲ့ သဘာဝဆေးဖက်ဝင် ပစ္စည်းများနဲ့သာ ထုတ်လုပ်ထားပါသည် 🍉🍑🍓
မှာယူလိုပါက ၀၉၄၂၀၀၃၀၂၅၅ Viber ( or ) ၀၉၇၆၆၁၃၅၇၄၄
နယ်မှမှာယူလိုသူများလည်း ကားဂိတ်ပို့ပေးပါတယ်ရှင့်မှာ တခြာပစ္စည်းကိုလဲအောက်ပါလင့်မှာဝင်ေ၇ာက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ရှင့် https://www.facebook.com/Minthettionlineshop7/
အမည်: ရွှေဆန်းသစ် သဘာဝ ခေါင်းလျှော်ရည်